सफल जीवन कसको चाहाना हुदैन र ? त्यसका लागी हरेक मानिसले त्याग्नुहोस यी ५ बानी - Eall Nepal
सफल जिन्दगी’ भनेको के हो ?
धेरै मान्छे सफल जीवन जिउनेबारे कुरा गर्छन्। तर, सफल जीवन भनेको के हो ? के यो भनेको सुविधामा बस्नु हो ? अध्ययनहरूले के बताउँछ भने सफल मानिसहरू नै बढी आत्महत्या गर्छन्। यदि सफलता पैसासँग मात्र जोडिन्छ भने धनी मान्छेले कहिल्यै आत्महत्या गर्ने थिएनन्। मान्छेहरू सफल हुन् कि हैनन् भनेर मापन गर्न यहाँ थुप्रै मापकहरू छन्। हरेक मान्छेका आ–आफ्नै बानी हुन्छन्। आ–आफ्नै व्यक्तित्व हुन्छ। केही बानीहरू राम्रा हुन्छन्, केही खराब हुन्छन्। सफल बन्न हामीले सिक्ने कुरामा कहिले पनि पछि पर्नु हुँदैन। त्यस्तै केही बानीहरू त्याग्नुपर्छ।
यदि सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तलका बानीहरू छाड्नुपर्छ–
सबै मान्छे सफल हुन चाहन्छन्। तर, केही थोरै मानिसमात्र सफल बन्छन्। यो किन हुन्छ भने केही मान्छे परिवर्तन हुनै चाहँदैनन्, केही मानिस परिवर्तनप्रति लचक हुन्छन्। जो आफ्नो इगोलाई पन्छाएर नयाँ कुरा सिक्नतिर लाग्छन्, उनीहरू सफल बन्छन्। सफल हुनु भनेको पैसा कमाउनु मात्र हैन। बरु आफ्नो जिन्दगीप्रति सन्तुष्ट हुनु हो।